सरकारकै षड्यन्त्रले स्ववियु चुनाव हुन सक्दैन - News Today
सरकारकै षड्यन्त्रले स्ववियु चुनाव हुन सक्दैन
Date: १९ माघ २०७५, शनिबार २०:०९
किशोर कुमार यादव
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फागुन १४ गते गर्नुपर्ने थियो । त्यसकोलागि देशका सबै दल र विद्यार्थी संगठन बीच छलफल र सहमति को आधारमा गर्नुपर्छ । तर सत्ताधारी दलले मधेशी दल र विद्यार्थी संगठनसँग कुनै छलफल नै नगरि केही दल र विद्यार्थी संगठनसँग मात्र छलफल गरि मिडियामा देखाएको हो । यसमा सरकार र त्रिविको षड्यन्त्र हो भने कुरा स्वतः पुष्टि हुन जान्छ ।
२०७३ फागुन १८ मा निर्वाचन भएका क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारीको म्याद समाप्त हुन लागेकोले पूर्व तयारी गर्न त्रिविले सबै आङ्गिक क्याम्पसलाई एक महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो । तर, तोकिएकै समयमा चुनाव गराउने विषयमा विद्यार्थी संगठन बीच सहमति नजुटेपछि स्ववियु चुनाव अनिश्चित बनेको हो ।
गत पुस २३ गते त्रिवि मातहतका सबै आङ्गिक क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव गर्न त्रिविले परिपत्र गरेको भए पनि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले अहिलेसम्म विद्यार्थी संगठनको सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न सकेको छैन । त्रिवि मातहतमा अहिले ६१ आङ्गिक र १०८० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । सबै सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव नहुनेतर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुने त्रिविको भनाइ छ ।
फागुन १४ को मिति ट¥यो
२०७५ फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन गराउने विषयमा दुई वर्षअघि नै विद्यार्थी सङ्गठन बीच सहमति भएको थियो । स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव गराउने विषय उतिबेलै टुङ्गो लागेको हो र, केही आङ्गिक र चुनाव हुने अधिकांश सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भयो ।
अहिले पनि फागुन १४ गते चुनाव हु
ने सम्भावना टरेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक थापा बताउँछन् । समान्यतयाः चुनाव हुनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन तालिका प्रकाशन गर्नुपर्छ । ‘नेविसंघ आन्दोलनमा रहेकाले उसको सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिएन । यही अवस्थामा फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन गर्न सकिँदैन ।’
स्ववियु निर्वाचन गराउन उपकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो देखाएका थिए । उनले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसबाट फर्कने बित्तिकै त्रिवि पदाधिकारी, विपक्षी दलका नेता, विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । भेंटमा सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठन चुनावको पक्षमा देखिए पनि आन्तरिक रुपले निर्वाचन चाहेको छैन ।
सबै दल र संगठन को बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ तर सरकार आफैँ चुनाव बिथोल्न खोजिरहेको छ । सरकार जसरी अनुदार ढङ्गले अगाडि बढेको छ, त्यसरी चुनाव हुन सक्दैन । वातावरण सौहार्दपूर्ण नबनाईकन चुनाव सम्भव छैन । तयार छैनन् सत्तापक्षकै विद्यार्थी सङ्गठन पनि स्ववियु चुनाव गराउन सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठन नै तयार नभएको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन एक नभएर सरकारको लोकप्रियता समेत खस्किएले चुनावबाट आफैँ तर्कन खोजेको हो । बाहिर चुनाव चाहेका ेजस्तो गरे पनि सङ्गठनभित्रको आन्तरिक कलह र दुई सङ्गठन एक नभएको असर चुनावमा देखिएला भने भयले उसलाई गाँजेको छ । पछिल्लो समय स्ववियुलाई धराशायी बनाउन लागि परेका छन्, त्यसको मतियार सत्ताधारी नै हो ।
स्ववियु चुनाव विद्यार्थी सङ्गठन एकताको लागि सुवर्ण मौका हो यसबाट कैयौँ साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । स्ववियु चुनावमार्फत् थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसले हाम्रो एकता प्रक्रियालाई अझ छोट्याइदिन्छ ।
नेविसंघलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भन्दा आफ्नै चिन्ता छ । पटक–पटक तिथि तय हुँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको, उसको थपिएको म्याद पनि माघ २ मा समाप्त भइसकेको छ र विधिवत रूपमा विघटित छ ।
विघटित नेविसंघ चुनावमा होमिँदा उमेदवार कसले तोक्ने ? कसले सदर गर्ने ? कसको हस्ताक्षर आधिकारिक मान्ने ? कसले बाँडेको टिकट आधिकारिक हुने ? यावत् प्रश्नले उसलाई चुनावमा जान खुट्टा कामिरहेको छ ।
(यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकटको राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् ।)
Previous : गुट्खाको विषयमा कर्मचारी बीच कार्यालयमै कुटाकुट
Next : मारवाडी समुदाय अधिकार र अवसरमा पछाडि रहेको युवाहरुको आरोप